Global Voices teny Malagasy » Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017 : Marianne Díaz Hernández · Global Voices teny Malagasy » Print
Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017 : Marianne Díaz Hernández
Voadika ny 13 Marsa 2017 16:24 GMT 1	 · Mpanoratra Marianne Diaz Nandika (fr) i Abdoulaye Bah, Naomy
(Fanamarihana: Ity andian-dahatsoratra ity dia mikasika ireo mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny tranonkala isan-karazany ato amin'ny Global Voices, antsoina izy ireo mba hifidy ny solontenan'izy ireo ao amin'ny Filankevi-pitantanan'ny Fikambanana mandritra ny 2 taona)
Fifidianana solontenan'ny mpilatsaka an-tsitrapo
Mpisolovava aho, mpanoratra tantara hai-famoronana  (Sci-fi) ary mpikatroka zon'olombelona, teraka tao Venezoela ary monina ao Santiago, Shily. Mpikatroky ny kolontsaina malalaka ihany koa aho, niasa hoy tompon'andraikitra momba ny lalàna tao amin'ny Creative Commons ao Venezoela ihany koa aho nandritra efa-taona farany. Niaina fiainana maro isan-karazany aho nandritra ny taom-polo farany, nanomboka tamin'ny asan'ny mpisolovava amin'ny sehatry ny asa, nanao asa lehiben'ny tonian-dahatsoratra tamin'ny trano famoaham-baovao iray, ary nanangana ONG momba ny zo nomerika tao Venezoela, nitarika atrikasa momba ny famoronanana asa-soratra sy atrikasa momba ny fiarovana nomerika. Aiza ho aiza aho ankehitriny: mpikaroka momba ny politikam-bahoaka eo anelanelan'ny teknolojia sy ny zon'olombelona aho. Noho izany rehetra izany, nahita aho fa ny manampy ny olona mba haneho hevitra no talentako, izay ao anatin'ny zava-drehetra ataoko, ary mahatonga ahy ho ato amin'ny Global Voices.
Ny ataoko ato amin'ny GV
Nanomboka tato amin'ny Global Voices aho tamin'ny taona 2010, hatramin'ny niandohan'ny asa an-tsitrapo nataoko (nirotsaka an-tsitrapo tao amin'ny Amnesty International sy Creative Commons nandritra ny taona maro aho). Nameno no antontan-taratasy ho mpirotsaka an-tsitrapo avy hatrany aho raha vao nahafantatra ny fisian'ny GV Advocacy (Advox), sy ny fomba fiasan'izany tetikasa izany amin'ny lohahevitra lehibe amiko indrindra: ireo fandrahonana marobe sy isan-karazany mahazo ny fanehoan-kevitra antserasera manerana izao tontolo izao. Nanomboka tamin'izany, niasa ho mpanoratra tao amin'ny Advox sy ny tranonkala fototry ny GV , mpandika lahatsoratra  tao amin'ny ekipa Lingua Espaniola ary nandray anjara tamin'ny tetikasa isan-karazany (ny tetikasa tena niraketan'ny foko dia ny tetikasa mahafinaritra GVeX ). Saingy ao anatiko ihany koa ny Advox ary mandray anjara betsaka amin'izany aho. Maro amin'ny zavatra ataoko no vaovao momba ny fandrahonana sy ny herisetra mihatra amin'ny fahalalahan'ny aterineto ao Venezoela; zavatra izay tena hireharehako ny fitaterana mahatalanjona nataon'ny ekipantsika mahafinaritra nandritra ny fihetsiketsehana taona 2014  tao amin'ny firenena.
Momba ity fifidianana ity
Tsy dia mahasarika ahy loatra ny politika, ka tsy dia hahita ahy hanentana loatra ianareo, fa ankamamiako ny fitokisana sy ny finoana tamin'ny nanendrena ahy ho amin'ity andraikitra ity avy amin'ny mpiara-miasa ato amin'ny GV ka ho voninahitra lehibe ho ahy ny hahafahako manompo ity fikambanana ity amim-pahavitrihana kokoa sy ny hiantsoroka azy tahaka izay efa niantsorohany ahy tao anatin'ny taona vitsivitsy izao.
Tao anatiny fito taona farany izao dia trano (tanindrazana) ho ahy ny Global Voices, fianakaviana (fianakaviana iray mieli-patrana manerana ny vazantany efatr'izao tontolo izao)  sady toerana ahafahan'ny zavatra ataoko hanova zavatra. Te-hanompo amin'ny maha solontenan'ny mpirotsaka an-tsitrapo aho mba hanohizan'ity fikambanana ity ho toerana azo antoka sy manabe voho ny fahalalantsika tahaka izay efa nataony tamiko.
Mino tanteraka aho fa ao amin'ny mpirotsaka an-tsitrapo ao aminy no itoeran'ny herin'ny Global Voices indrindra. Hanery ny tenako aho noho izany hihaino tsara ny hevitr'izy ireo ary ataoko ho laharam-pahamehana ny fomba mampamerina amin'ny fikambanana indray ny soatoavina entin'izy ireo amin'ny maha mpirotsaka an-tsitrapo azy ireo sady miara-dalana sy mandray anjara amin'ny fitomboana manokana sy fisondrotana arak'asa. Efa nanam-pahafahana nihaona sy nandany andro niaraka tamin'ny mpirotsaka an-tsitrapo maro tato amin'ny GV aho tamin'ny fotoana samihafa, ary mihevitra aho fa nandray anjara tamin'ny fananganana, nanome haja ny GV amin'ny maha fikambanana azy izany sady nezahiny hotontosaina izany. Tiako ny hampiditra ireny soatoavina ireny amin'ny zavatra rehetra ataoko, ary hanao izay rehetra azoko atao hiantohana fa mifanaraka amin'ny hevitra sy ny fihetseham-pon'ny mpirotsaka an-tsitrapo hafa ny fomba fijeriko ny GV.
Mandritra izany fotoana izany, avy amin'ny toerana izay mety hampidi-doza antsika ihany koa ny fitadiavam-piovana, tiako ny manoritra ny mahazavadehibe ny fahatsapan'ny mpirotsaka antsitrapo ho ao amin'ny toerana azo antoka sy ny fiantohana fa toerana iray ahafahan-dry zareo mahita fanampiana raha ilaina izany ny GV ary vonona ny hamaly haingana sy mahomby amin'izany ny fikambanana amin'ny ankapobeny. Mino mafy aho fa mba hahafahantsika manao tsara ny asantsika sy manatratra ny tanjontsika amin'ny maha-fikambanana antsika, ny laharampahamehantsika voalohany dia ny fiantohana fa manana ny fepetra rehetra hahombiazana ny mpirotsaka an-tsitrapo ato amintsika.
Tiako ihany koa ny milaza fa mandray anjara amin'izany fifidianana izany miaraka amin'ireo mpikambana marobe manana ny maha-izy azy ato amin'ity fikambanana ity ihany koa aho, ary ho faly amin'izay ho solontena voafidy amin'izy ireo ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny GV aho. Manome toky anao aho fa raha voafidy, dia hanaja ireo fenitra momba ny mangaraharaha efa misy sy ny fahavononana andrasako amin'izy ireo tsirairay avy.
Raha te hiresaka izay tianao resahana ianao, na mikasika fifidianana izany na tsia, dia afaka mifandray amiko ianao amin'ireto adiresy ireto ianao :
e-mail sur mon formulaire de contact !
Toerana iray ahatsapako fa tsara aro aho. Saripikan'i Jeremy Clarke, CC BY NC 2.0
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/13/96662/
 mpanoratra tantara hai-famoronana: http://www.palabraserrantes.com/marianne-diaz-hernandez-just-like-riding-a-bike/
 ONG momba ny zo nomerika : http://www.accesolibre.org.ve/
 tranonkala fototry ny GV: https://es.globalvoices.org/author/marianne-diaz-hernandez/
 ao anatiko ihany koa ny Advox : https://advox.globalvoices.org/author/marianne-diaz/
 fihetsiketsehana taona 2014: https://globalvoices.org/specialcoverage/2014-special-coverage/protests-in-venezuela/
 (fianakaviana iray mieli-patrana manerana ny vazantany efatr'izao tontolo izao): https://community.globalvoices.org/2015/02/salamat-cebu-random-notes-on-the-global-voices-citizen-media-summit/
 sur mon formulaire de contact : https://community.globalvoices.org/author/marianne-diaz/